Interviews Archives » Page 15 of 19 » Myanmar Peace Monitor
KNG speaks to the Kachin singer and songwriter who negotiated for IDP return with the Tatmadaw. Nearly 280 people from 46 displaced families in camps across Kachin State were recently able to go back to Nam San Yang village in Waingmaw Township, escorted by the Burma Army. Noted Kachin singer and songwriter Hpaula Gam Hpang […]
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့က မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ ၇၂ ကြိမ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့အခမ်းအနား သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ မွန်သတင်းအေဂျင်စီ အယ်ဒီတာ ဗညားအောင်နှင့် အခြားသတင်းထောက်တို့၏မေးမြန်းချက်များအား မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နိုင်အောင်မင်း ဖြေကြားခဲ့သည်ကို စုစည်းတင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မေး- NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံရေးအရ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဘာတွေဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသလဲ? ဖြေ-မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ၂၀၁၈ မှာ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးကတည်းက ကျနော်တို့ မွန်တိုင်းရင်းသား အကြား ညီညွတ်ရေးတည်ဆောက်ခဲ့တာက တစ်ခု၊ နောက်ဒုတိယအပိုင်းမှာ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး တွေ့ဆုံပြီး အမြင်ချင်းဖလှယ်ကြတာရှိတယ်၊ နောက်တတိယအပိုင်းမှာ ကျနော်တို့ပါတီ ရွယ်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံအဖြေရှာရေး ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာ ပင်လုံညီလာခံကို တက်ခဲ့ပါတယ်၊ နောက်စတုတ္တအပိုင်းမှာ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနဲ့ မရေးထိုးသေးတဲ့ ဘဝတူတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ရှေ့ဆက်ဘယ်လိုတိုက်ပွဲဝင်သွားကြမလဲ […]